Global Voices teny Malagasy » Afrika Atsimo: Mahita marimaritra iraisana ao anatin’ny “ady ara-pirazanana” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Mey 2018 4:25 GMT 1	 · Mpanoratra Prisha Bhoola Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Afrika Atsimo, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika
Tsy daltoniana tokoa ny Afrikana Tatsimo. Ny efa-polo taonan'ny apartheid  no niantoka fa raiki-tapisaka ao am-po sy ny sain'ny olom-pirenena maro ao Mzansi (araka ny ahafantarana ny firenena ao an-toerana) ny hevitra momba ny firazanana. Ny fiandohan'ny demokrasia tamin'ny taona 1994 no niteraka fanantenana ho amin'ny fiarahamonina mitovy tantana, afaka amin'ny fitsarana an-tendrony amin'ireo lalàna manavakavaka izay nampisaraka ny Afrikana Tatsimo nandritra ny fotoana maharitra. Na izany aza, enina ambin'ny folo taona lasa izay, miha-miharihary fa enta-mavesatra hitoloman'ny Afrikanina Tatsimo mba horesena ny firazanana sy ny fanilikilihana mifandraika amin'izany.
Raha tsaraina avy amin'ny tontolon'ny bilaogy, toa leon'ny fametahana anarana azy ny Afrikana Tatsimo ary tsy maharitra fa te hahita marimaritra iraisaina. Maneho ireo fihetseham-po ireo i Ryland Fisher :
Ny fampiasana “fanondroana ho fitaovam-piadiana”, araka ny voalazan'i Ryland, dia zavatra mahazatra ny Afrikana Tatsimo. Indraindray dia antsoina hoe “mametaka karatra firazanana” izany. Toa matetika ampiasaina ny firazanana mba hiezahana handresena amin'ny hevitra na hilazana hevitra iray. Raha ny marina, nanjary nalaza ny teny hoe karatra firazanana ka na ny tanora Afrikana Tatsimo aza namokatra karatra mivaingana ary nivarotra azy ireo araka izay azo jerena ato .
Tena be fanantenana momba ny toetry ny fifandraisana ara-pirazanana ao Afrika Atsimo ny tenin'i David Gemmell’ :
One-Eye-Only  manana tantara tahaka izany:
Ny amboara eran-tany FIFA ho avy koa dia nanampy tamin'ny fitomboan'ny rehareha sy ny fiarahan'ny fiarahamonina afrikana tatsimo. Maro amin'ireo Afrikana Tatsimo no naneho ny reharehany sy ny fahatokisany ny firenena amin'ny fampisehoana ny sainan'i Afrika Atsimo amin'ny fiaran-dry zareo, araka ny fanazavan'ny African Crisis :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/31/120270/
 David Gemmell’: http://www.thedailymaverick.co.za/opinionista/2010-03-24-my-south-africa-is-integrating
 Dogs of War : http://www.thoughtleader.co.za/siphohlongwane/2010/04/05/sorry-to-disappoint-but-south-africa-will-succeed/